Tacsi: انا لله وانا اليه راجعون Marxuuma Hooyo Yusur Dahir Aye, oo shalay Jimce ku geeriyootay Magaladda Borama ee Gobalka Awdal. « SAWNEWS NETWORK
« Tacsi: انا لله وانا اليه راجعون Marxuuma Yusur Daahir Aye oo shalay oo Jimcaha ku geeriyootay Magalada Borama
Tacsi: انا لله وانا اليه راجعون Marxuuma Hooyo Yusur Dahir Aye, oo shalay Jimce ku geeriyootay Magaladda Borama ee Gobalka Awdal.
Posted by Sawnews.tk on December 19, 2009
Innaa Lillahi Wa Innaa Ilayhi Raajicuun Dhamaan anagoo aha Ardayda wax ka barta Jamacada karachi ee dalka Pakistan waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan ilma XAAJI AXMAD MISAN oo ay Marxuuma Hooyo Yusur Dahir Aye, oo shalay Jimce ku geeriyootay Magaladda Borama ee Gobalka Awdal. Waxaayna Ilaahay uga baryayaan Marxuumada inuu janadii fardowsa ka waraabiyo Eheladii Qaraabadii, iyo Asxaabtii ay ka tagtayna samir iyo iimaan ka siiyo,
…………………. Amin Amin Amiin………………………
1-DR.Mukhtar ismacil Cige
2-Mukhtar Diriye Khalif
9-Maxmaed Cumar Samatar
12-cabdisamad sheikh muuse cabdilaahi(BARE)
Waxan ugu ducaynaynaa Hooyo Yusur in ilahay u iftiinsho Qabriga una Waasiciyo waxnan mar labaad ilahay uga baryaynaa in uu Janadii Fardowso Ka Waraabsho ………..Amin Amin Amin
This entry was posted on December 19, 2009 at 11:55 am	and is filed under News (Warka).